Maraoka " Journey-Assist - Mahasoa sy mahaliana momba an'i Maraoka
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Africa » Maraoka
Maraoka. Fampahalalana ankapobeny
1 jona, 2019
Maraoka ho an'ny fizahan-tany
Ny manafaka an'i Maraoka dia misy ny fahasamihafana. Eto amin'ity firenena ity dia misy havoana tendrombohitra, lemaka misy tany lonaka sy tany lemaka. Manana toe-tsaina milamina ilay firenena. Misy tsio-drivotra iray avy any amin'ny Ranomasimbe Atlantika, azo antsoina hoe famonjena marina ho an'izay rehetra tsy mankasitraka ny hafanana be.
Ny tahan'ny heloka bevava any Maraoka
Any Maraoka, maro ny zoro sary mahafinaritra izay misy fitsangatsanganana tsy tapaka. Ny mpizahatany rehetra dia manana fahafahana hahita ny toerana tena tiany eto amin'ity firenena ity. Ankoatra izany, tena azo antoka eto. Ambany ny heloka bevava, arahi-maso tsara izy ireo.
Misy fizahan-tany misy sy ny fitsidihana any Maraoka
Tsy i Maraoka no toerana fitsangantsanganana lafo indrindra. Ny tapakila eto dia amidy amin'ny vidiny ambany ihany. Noho izany, ny dia mankany Maraoka dia safidy mora vidy ho an'ny mpizahatany amin'ny tetibola. Mandritra izany fotoana izany dia manana fotoana tsara hilalao onja sy fialamboly amoron-dranomasina ny firenena ary koa tsangambato manan-tantara maro.
Tendrombohitra Atlas any Maroc
Noho izany, i Maraoka dia lasa safidy malaza eo amin'ireo mpizahatany avy amin'ny USSR teo aloha. Ary ireo mpizahatany avy any Eoropa Andrefana dia efa ela no tia an'io firenena io, satria efa tsara ny fotodrafitrasa eto an-dafy, ny kalitaon'ny serivisy dia mihatombo amin'ny vidiny ary mitombina ny vidiny ary hotely be dia be.
Resorts isaky ny tsiro
Any Maroc, dia somary vitsy kely ny habetsaky ny tsirony. Any amin'ny toerana misy onja mahery, misy trano fandraisam-bahiny ho an'ny mpankafy amin'ny fitsidihana. Ireo izay mahaliana indrindra amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina dia toerana mety misy fasika malalaka. Ny spas sasany dia manampahaizana manokana amin'ny thalassotherapy.
Loza any Maroc
Angamba ny tena olana tsy dia mahafinaritra ataon'ny mpizahatany any Maraoka dia ny fanenjehana tsy tapaka ataon'ireo mpivarotra, mpangataka, mpanakalo vola, sns amin'ny toerana ho an'ny besinimaro. Ny fangatahan'izy ireo dia tsy maintsy nolavina tamim-pahatokisana, fa am-pahamendrehana, miezaka ny hisorohana ny fifanolanana. Amin'ny tranga lehibe, tsy misy dikany ny hifandraisana amin'ny mpitari-dalana (raha miaraka amin'ny vondrona) na (raha mandeha irery) amin'ny polisy. (Tokony ho tsaroana, tsy fahita, fa voarara ny maka sary ireo polisy any Maroc). Ary azo antoka fa tokony mandà ny tolotra foana ho an'ny fividianana na fampiasana tenifototra ianao.
Loza any Maroc. zava-mahadomelina
Kitapom-bola eny an-tsena
Manakaiky ireo trano fandraisam-bahiny eto amin'ity firenena ity ianao dia afaka mandehandeha amin'ny alina. Fa any amin'ny basy sy ny toerana be olona, ​​dia tokony mbola malemy paika ianao, satria mandeha ny poketra ao.
Fisorohana ny aretina tsy mifindra any Maroc
Mba hisorohana ny fihanaky ny areti-mifindra sy ny tsy fihanaky ny gastrointestinal any amin'ny tany tropikaly dia ilaina ny manalavitra ny fampiasana salady, ranom-boankazo vao namboarina, voankazo sy ny ranom-boankazo ao amin'ny toeram-pitsaboana misy eo an-toerana.
"Mpanakalo vola" an-dalambe
Ny fifanakalozana fifanakalozana amin'ny vola eny an-dalambe ary amin'ireo mpivarotra tsy nahazoana alàlana dia voararan'ny lalàna ao an-toerana ary matetika koa ny fanaovana hosoka, ka tokony hiova vola any amin'ny toerana ara-dalàna ihany. Anisan'izany ny banky, hotely, ny trano fisakafoanana lehibe sy ny fifanakalozana amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny seranam-piaramanidina.
Zava-dehibe ny fampiasana sunblock, solomaso maizina, satroka mba hiarovana ny lohanao amin'ny masoandro. Ny hafanana any Maroc dia milefitra mora foana, ka izany no mahatonga ny mpizahatany indraindray tsy mahatsikaritra ny fomba nandorana ny hodiny.
Dirham (MAD). Varotra fifanakalozana any Maraoka
Ny vola nasionaly Maroc
Maraokana Dirham (MAD)
Ny vola nasionalin'i Maroc dia ny dirham maraokana. Ny dirham 1 dia mizara zato zato. Amin'ny fivezivezena dia misy taratasim-bola ao amin'ny antokom-pinoana misy 100, 20, 50 ary 100 dirhams, ary koa ny vola madinika ao amin'ny antokom-pinoana 200, 5, 10 centimes ary 20/1, 2, 1, 2, 5 dirhams. Ny mampiavaka ny dirham maraokana dia mitoetra ao amin'ny fitombanan'ny tahan'ny fifanakalozam-bola mandritra ny taona maro, satria fehezin'ny fanjakana izy.
Rehefa avy nanakalo vola dolara na euros ho an'ny dirham an'ny Maraoka dia mila mitazona taratasy fanamarinana momba ny fifanakalozana ianao. Ilaina ny hanaovana fifanakalozana eo amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny seranam-piaramanidina alohan'ny hialany amin'ity firenena ity. Ny taham-panakaloan'ny dirham raha oharina amin'ny vola hafa dia mitovy amin'ny fifanakalozana ara-dalàna rehetra ao amin'ny firenena.
Mampiasa karatra plastika any Maraoka
Ny fandoavam-bola amin'ny carte de crédit dia azo atao amin'ny hotely lehibe na amin'ny fivarotana lehibe na amin'ny fivarotana lehibe na trano fisakafoanana lehibe na malaza. Ny ATM amin'ny faritra fivarotana dia ampy.
Ampidirina sy manondrana vola any Maraoka
Azonao atao ny manafatra vola vahiny any Maraoka amin'ny habetsany, fa ny fampiasana azy amin'ny fandoavam-bola any amin'ny firenena dia voarara mafy. Noho izany, dirhams ihany no ekena na aiza na aiza. Voarara ny fanondranana vola Maraokana miainga amin'ny firenena. Amin'izay fotoana izay, na dia any Duty Free aza ny seranam-piaramanidina dia tsy manaiky dirhams intsony.
Inona ny vola tokony hoentinao any Maraoka?
Avy amin'ny vola dia tokony hitondra amerikanina na euros miaraka aminao. Ireo teboka fifanakalozana dia manaiky robles rosiana na vola avy any amin'ny firenen-kafa taloha USSR dia tsy azo alaina any Maraoka.
Ny tahan'ny fifanakalozana ankehitriny any Maraoka
Ny kajy ny mpampivadika vola dia mampiseho hatrany ny tahan'ny vola ankehitriny any Maroc.
Fitateram-bahoaka any Maroc
Ny fitaterana eto amin'ity firenena ity dia novolavolaina tsara ary misy lalamby avo lenta, lalamby fitaterana (fifaneraserana, iraisam-pirenena ary famoronana), taxi-be sy fitaterana rivotra.
Ny tambajotram-pifandraisana eto amin'ity firenena ity no tsara indrindra amin'ny kaontinanta afrikanina aorian'i Afrika atsimo. Ny halavan'ny totalin'izy ireo tamin'ny 2015 dia 58 km, ka ny 000 km dia lalana voavoatra, ary maherin'ny 41 km ny làlambe tol.
Bus any Maraoka
Fifandraisana amin'ny fiara fitaterana mankany Maraoka
Ny fiara fitateram-bahoaka no endrika malaza amin'ny fitateram-bahoaka ao Maroc. Tsy dia lafo ny fitsangatsanganana ao aminy (3-10 dolara amerikana amin'ny lalan'ny fifaneraserana). Ny orinasan-be mpamaky indrindra ao amin'ny firenena dia antsoina hoe CTM LN ary mampifandray ny tanàna Maraokana rehetra. Ny air bus tsirairay amin'ity orinasam-piaramanidina ity dia misy fantsom-pifandraisana.
Ao anatin'ny tanànan'i Maroc, vitsy ny bisy ary tsy dia mihazakazaka izy ireo (antsasak'adiny no elanelam-potoana). Ny saran-dàlana dia 5-10 dirham (0,5-1 dolara).
Taxi any Maroc
Ary koa eto an-tanàna, dia misy taxi. Ireo loko ireo dia hoso-doko amin'ny loko marevaka ary misy sainam-pirenena sy fitoeram-bary. Mitentina $ 1 isaky ny kilometatra ny saran-dàlana ao amin'izy ireo, fa amin'ny ankapobeny dia ny vidin'ny fitsangatsanganana iray manontolo no azo atao mialoha rehefa miresaka amin'ny mpamily (afaka miantsoroka aminy ianao), satria tsy misy metatra ao amin'ireo fiara.
Minibuses ao Maraoka
Misy ihany koa ireo taxi-mizotra manana làlan-dàlana manao fitateram-bahoaka mpandeha. Ny saran-dalana dia voafaritry ny mpamily mialoha ary zaraina ho an'ny mpandeha rehetra. Ny fandoavam-bola dia tokony ho amin'ny faran'ny fitsangatsanganana.
Sidina an-trano any Maraoka
Ny tanàna sivy lehibe indrindra any Maroc dia misy seranam-piaramanidina iraisampirenena - any Marrakech, Casablanca, Tangier, Rabat, Fez, Agadir, Quarzazate, Nador ary Essaouira. Ny sidina nasionaly Royal Air Maroc dia manidina na any ivelany na ao Maroc. Misy sidina mahazatra eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina roa ambin'ny folo: Agadir, Casablanca, Al Hoceima, Dohla, El Aaiun, Fez, Nador, Marrakesh, Oujda, Oujda, Oujdazat, Tangier, Rabat.
Fifandraisana amin'ny lamasinina any Maraoka
Ireo lalamby dia somary mandroso sy mifantoka any afovoany sy avaratry ny firenena. Mampifandray tanàna marobe marobe ry zareo - Rabat, Casablanca, Meknes, Fez, Marrakesh. Any Maraoka, misy ihany koa ny lamasinina haingam-pandeha, izay mampiavaka ny fitomboan'ny fampiononana.
Fiantsenana ao Maraoka. Inona no hividy?
Safidy fialam-boly mahaliana ao Morocco ny fiantsenana. Saika azonao vidiana eto daholo.
Fiantsenana ao Maraoka
Ny souvenir dia mety indrindra hividy any Essaouira. Tsara ny mampatsiahy fa amin'ny faritra taloha amin'ny vidin'ny tanàna dia ambany noho ny tamin'ny vaovao. Amin'ny alàlan'ny fifandrindrana, afaka mividy hatrany ny vokatra tianao indrindra ianao amin'ny vidiny mora kokoa noho ny niantsoana azy tany am-piandohana.
Souvenir any Maraoka
Akanjo marika sy kiraro any Maraoka
Aleo mividy akanjo sy kiraro misy marika eropeana sy amerikanina any Casablanca. Ny Fez dia mety indrindra amin'ny fividianana firavaka volamena, raha Rabat kosa mety indrindra amin'ny fividianana karipetra sy entana vita amin'ny hoditra. Amin'ireo tanàna rehetra ao amin'ny firenena dia ao Marrakech ny vidiny lafo indrindra. Izany dia tsy ambany noho ny zava-misy fa ao aminy no amidy ny ankamaroan'ny entana eropeana.
Fivarotana ary Bazaar any Maroc
Ny ampahany lehibe amin'ny fihodinan'i Maraoka dia eo amin'ireo tsena izay miasa manomboka amin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Mivarotra ny bazaha eo an-toerana, indrindra indrindra, fitaovana avo lenta sy fanaka haingo ho an'ny atitany efa vita tanana. Raha mandehandeha eny an-tsena ianao dia afaka mahita atrikasa any amin'ny faritra afovoany, izay mahatonga ny mpanao asa tanana manao souvenir tany am-boalohany. Ny toeram-pivarotana any Maroc dia ivon'ny fiainana ara-kolontsaina ho an'ny vahoaka. Ny iray amin'ireo bazava mahaliana indrindra dia miasa ao amin'ny tanàna kely iray antsoina hoe Suk Et Tlata. Any ianao dia afaka mahita vokatra fivarotana, labozia vita tànana, lamba tena Maraokana ary zava-manitra marobe isan-karazany.
Boky any Maroc
Serasera finday sy Internet any Maraoka
Ireo mpandraharaha finday ao Maroc
Ny serasera finday any Maraoka dia tsara orina. Misy mpandraharaha finday 3 eto amin'ny firenena. Ireto ny Maroc Telecom, INWI ary Orange. Indray mandeha, mba hahafahany manao ny tenany ho isa finday mando, dia tsy maintsy maka fahazoan-dàlana ao amin'ity firenena ity ny vahiny iray. Saingy tsy misy olana tahaka izao. Ny serasera finday eto dia tsy tonga lafatra foana fa lafo izany ary afaka mividy karatra SIM na aiza na aiza ianao.
Namidy karatra SIM any amin'ny seranam-piaramanidina
Any amin'ny seranam-piaramanidina, misy ny promoter izay manome ny fonosana kintan'ny fampiroboroboana amin'ny vidiny fihenam-bidy, raha tsy maimaim-poana. Manao fanamiana mitovy aminà logos an'ny mpandraharaha finday izy ireo. Tena tsara raha hividy karatra SIM amin'izy ireo.
Raha mbola tsy nahita promotor ianao teny amin'ny seranam-piaramanidina dia afaka mividy karatra SIM amin'ny iray amin'ireo tranombarotra serasera finday, izay misy habetsaka ampy amin'ny faritra rehetra any Maraoka. Zava-dehibe ny hahazoana antoka fa ny mpivarotra dia manangana ny Internet amin'ny findainao, fa raha tsy izany dia tsy maintsy hanao azy irery.
Ny famerenan'ny kaonty dia azo atao amin'ny fividianana karatra kely. Amidy any amin'ny fivarotana na mihoatra be dia be izy ireo. Mila manonona ny anaran'ny mpandraharaha sy ny habetsaky ny famenenana fotsiny ianao.
Vidiny ho an'ny karatra SIM any Maraoka
Ny vidin'ny karatra SIM mety amin'ny mpizahantany dia matetika 30-50 dirhams (izany dia 3-5 dolara). Miasa mandritra ny 2 herinandro izy io ary misy 30-120 minitra fifandraisana ary avy amin'ny Internet 1 GB. Mitovy ny fepetra ho an'ny mpandraharaha Maraokana rehetra.